नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट? – PathivaraOnline
Home > समाज > नेपालमा कहाँ–कहाँ पाइन्छन् कल गर्ल, कतिसम्म छ रेट?
admin November 30, 2020 समाज	0
रवि कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एउटा फ्ल्याटमा पुगे । खानाका परिकारदेखि मापसेसम्मको राम्रो व्यवस्था भएको फ्ल्याटमा दुईजना युवती थिए । धनगढीबाट काठमाडौं आएका बेला काम सकेर मस्ती मुडमा रहेका रविले एक हप्तासम्म प्रयोग गरेको ट्याक्सीमार्फत त्यो फ्ल्याटको ढोका ढकढकाउने अवसर पाए । उनको डिल भयो– ५ हजार रूपैंया, ८ घन्टाको समय । खाना, खाजा र दुई बोतल मापसे पनि । साथमा चाहेको सबै पनि ।
केही समय लन्डन समेत बसेका उनले नेपालमा सस्तो र राम्रो सुविधा पाएको महसुस गरें । उनी भन्छन्,‘लन्डनमा त व्यावसायीक रूपमा नै यस्ता ठेगाना पाइन्छन्, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा पनि सुरु भएको रहेछ ।’ रविले हरेक पटकको काठमाडौं बसाईलाई सुखमय बनाउने सजिलो माध्यम पनि भेटेका छन् । रविमात्र होइन जीवन बुढाथोकी (नाम परिवर्तन) लाई जतिबेला शरीरलाई आनन्द लिने मन हुन्छ इन्टरनेट साइट खोतल्न थाल्छन् ।
कल गर्ल सम्बन्धी व्यावसायीक साइटमा रहेका ठेगानाका नम्बर र युवतीसँग सम्पर्क गर्छन् । केही समयमा नै डिलअनुसारको सेवा लिने गरेका छन् । रेडलाइट एरिया नभए पनि नेपालका विभिन्न सहरमा कल गर्लको संख्या भुसमा आगो हुर्किए जसरी बढेको छ । खासगरी विद्यार्थी, रोजगारी गरिरहेका युवतीहरूले छिटो आम्दानीका लागि कर्ल गर्लको पेशालाई अपनाउन थालेका छन् । यसको यकिन तथ्यांकन नभए पनि विभिन्न सहरमा युवतीहरूको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।
भेटियो दुधालु गोरू, महादेव सम्झी दर्शन गर्नेकाे यस्तो भीड, महादेवकाे दर्शन स्वरूप सेयर गराै
गोङ्गबु घटनामा बल्ल खुल्यो अहिलेसम्म नखुलेको सबैलाई चकित पार्ने अर्काे रहस्य!